Isinciphisi seSMR -Singapore amandla okuhambisa umbane pte ltd
1, iiHubhu zokuPhuma
Uhlobo oluqhelekileyo okanye lokukhetha iihabhu ezinobunzima beetriki ziyafumaneka ukuze zilungele iidayimitha zamazwe angaphandle.
ezibini, Precision iPrimiyamu esemgangathweni yokuGiya
I-PC idale iihelical Helical. Izinto eziQinisekisiweyo zeAlloy zoMthwalo oPhezulu oPhezulu, iMeko yeCarburized yobomi obandisiweyo bemihla ngemihla, iProfayile yoMhlaba (ezinye iipinki eziphakathi zichetyiwe), iProfayili yamazinyo esithsaba, Ngokuhambelana ne-ISO 1328-1997, i-98% yokuSebenza kweNqanaba ngalinye, UkuSebenza okuThuleyo kunye neZinyo ngaphakathi Unxweme.
I-3, aPhezulu oPhezulu loLwakhiwo lweZindlu kunye nesitayile
Shut Grain Cast Ukwakhiwa kwentsimbi, ukungcola okuNqabileyo kunye neempawu zokumelana nokukhwankqiswa, ukuCola ngokuDikwa kunye nokuGcinwa ukuze kuqinisekiswe iNdibano ye-Inline echanekileyo.
I-4, i-Shaft Shafts enamandla
Isinyithi seAlloy esinamandla, siQinisekile, kumhlaba kwiijenali, ukuHanjiswa kweeGiya kunye noLwandiso, kuMthwalo oPhezulu kunye neMithwalo ePhakamileyo yeTorsional, iZitshixo zoBukhulu beShaft zoKothula ngokuThoba kunye nokuNgqinelana neMigangatho ye-ISO.
I-5, i-Case Lugs eyongezelelweyo (Ngaphandle kwe-H kunye ne-J Gear Imeko)
Ukuphelisa isidingo soQinisekiso oluBalulekileyo lweeTyhuthi zeengalo zeTorque, uLawulo lweNdawo yeTorque yesiqhelo yokuNyusa ingalo ngaphakathi kwemida ecetyiswayo.
Iinxalenye zokukhetha, ukuBuyela umva kwesixhobo esiNgasemva, kunokufumaneka kuwo onke ama-13: inye kunye nama-20: 1 iiyunithi zeRatio kwaye ungacebisi iiyunithi ezi-5: 1.
7, Ukunikela kunye neoyile amatywina
Ukuthwala kulungelelaniswe ngokulinganayo kwaye kungqinelane nesicwangciso sobukhulu be-ISO, ngokufumaneka ngokuFumaneka kwihlabathi liphela, amatywina eoyile aphindwe kabini.
Uhlobo lweLipped Garter yeNtwasahlobo, Ukuqinisekisa ukuTywinwa kweoyile okusebenzayo.
8, oonobumba abaphelileyo
Ukutywinwa kweepleyiti eziKhawulezileyo eziPhakathi, ukuya kubungakanani beZindlu ze-ISO.
I-9, iNdibano yeengalo zeTorque
Uhlengahlengiso olulula lweBelt.